Iran : Ngolin’ny hatsiaka ! · Global Voices teny Malagasy
Iran : Ngolin'ny hatsiaka !
Voadika ny 11 Janoary 2008 11:39 GMT
Vakio amin'ny teny Português, عربي, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Misedra ririnina tena henjana i Iran amin'ity taona ity nohon'ny hatsiaka. Tanàna maro no voafandriky ny oram-panalà ary tsy latsaky ny valo ireo olona (efa) namoy ny ainy. Voasembatsembana aza hatramin'ny tolotra “gazy” [voan'ny delestazy-na gazy, satria zaraina isan-tokantrano toy ny rano ny an-dry zareo ny gazy] ary na dia firenena faharoa faran'izay manan-karena ara-gazy i Iran, dia aman-tapitrisany ireo mponina tsy amina famanàna trano.
Mpiblaogy maro no nanapariaka sarin'ireo “tanàna ngolin'ny hatsiaka” sy nizara ireo zavatra hitany ary nitsikera ny fitondrana amin'ny tsy fisian'izay fitantanana akory hanarenana izao voina (voa-janahary) izao.
Sary nalaina tany Rasht, tanàna any amin'ny faritra Avaratry Iran tao amin'ny blaogy Kourosh Ziabari.
Nik Ahang Kosar, izay mpanao sariitatra sady mpiblaogy dia nanapariaka sariitatra izay mitsikera ny tsy firaharahan'ny fitondrana ireo olona izay tsy manan-kialofana any Iran. Ny soratra mandravaka izany sariitatra izany dia olona manambara fa tsara vitana (kokoa) ireo tsy manan-kialofana any Palestina sy Libanona, satria mahazo fanampiana avy amin'Iran izy ireny.
Raze No (izay midika hoe “tsiambaratelo vaovao” amin'ny teny Farsia) dia mitatitra fa mihidy sy tsy azo ampiasaina ny ankamaroan'ireo lalàna sy seranam-piaramanidina nohon'ny toetr'andro ratsy. Ankoatr'izany dia ambarany koa fa hikatona mandritra ny roa andro ireo sekoly sy ireo birao any Teheran ary tanàna maro eran'i Iran. Nanapariaka sary maromaro ahitana ny tanànan'i “Teheran ngolin'ny hatsiaka” koa izy.
Akbar Montakhabi, izay mpanao gazety sy mpiblaogy dia manoratra [Fa]:
“Tananà maro any amin'ny faritra Avaratry Iran no ngolin'ny hatsiaka ary dia voasembatsembana hatramin'ny tolotra gazy. Tsy ampy koa ny tolotra mofo any amin'ny tanàna maro. Manoloana izany toe-javatra izany, ny filoham-pirenena Mahmoud Ahmadinejad dia nanolo-kevitra ny vahoaka mba hampihena ny fandaniany angovo sy hanao ankanjo mafana kokoa.”
Otopia koa dia nanapariaka sary vitsivitsy ahitana olona marobe milahatra hividy ronono. Velom-panontaniana izy hoe “Iza no hino fa ity firenena ity dia manondrana solika izay amidy $100 ny barila iray ?” Nambaran'i Otopia fa niandry hatramin'ny 1 na 2 ora teo ivelany ireo mpanjifa ronono.
Uzakyol kosa dia milaza fa tena samihafa be mihitsy raha ampitahaina amin'ny fitantanan'i Torkia ny tsy fisian'ny gazy vao tsy ela tany aminy. Raha tanàna maro no tsy misy gazy intsony any Iran, ny tany Torkia kosa dia afaka notantanin'ny fitondrana ihany. Ny fahasamihafana hoy ity mpiblaogy ity dia satria an-tanan'ny fanjakana ny fitrandrahana ny gazy aty Iran ary any Torkia kosa dia an'ny orinasa tsy miankina izay haingana kokoa amin'ny fitadiavana vaha-olana satria tsy henjana ny rohim-piadidiana.
Jomhour dia manoratra:
“Namoaka fanambarana ny governemanta izay milaza fa akatona daholo ireo fanorenan-tranom-panjakana, ireo sekoly sns … afatsy ireo Banky ihany sy ny biraon'ny filoham-pirenena, ary ireo tobim-pitsaboana. Izany ve tsy hetsika [propagandy] natao indray hanasoavana fotsiny ny anaran'ny filoham-pirenena Iraniana ?”